Nigeria: In ka badan 100 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay wershed shidaalka sifaysa
ABUJA, NIGERIA - In ka badan 100 qof ayaa ku dhintay, tiro kale oo aad u badanina way ku dhaawacmeen qarax xooggan oo ka dhacay warshad u hawlgasha si sharci-darro ah oo sifeysa shidaalka ceydhiin oo ku taalla Koonfurta-bari ee dalka Nigeria.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in dab uu ka kacay wershedda habeenimadii Jimcaha, isaga oo dabkaasi uu si degdeg ah ugu fiday laba goobood oo lagu kaydiyo shidaalka oo ku yaalla wersheddan sifaynta shidaalka ee sida sharci sharci-darrada ah u hawlgasha, waxaana taasi ay sababtay in dabku wada gaadho guud ahaan dhismaha wershedda isaga oo markii dambena uu dabku uu ku faafay dhismayaasha ku hareeraysan, sida uu xaqiijiyey Declan Emelumba oo guddoomiyaha warfaafinta ee gobolka IMO.
Waxaa haatan la baadhayaa, sababta keentay qaraxa iyo weliba khasaaraha uu geystay dabka ku faafay dhismayaasha wersheddaasi.
Muuqaallo argagax leh oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadka ku gubtay dabka ka kacay wersheddan, hase ahaatee wakaaladda wararka ee Associated Press oo warkan daabacday, uma suuro gelin inay si madax-banaan u xaqiijiso muuqaalladaas.
Micheal Abattam oo ah afhayeenka taliska booliska ee gobolka Imo ayaa yidhi "Dad badan ayaa dhintay, dadka dhintay dhamaantood waa shaqaale ka hawlgelayey wersheddan"
Maamulka gobolka Imo ayaa baadigoob ugu jira inay gacanta ku dhigaan mulkiilaha wersheddan sida sharci-darrada ah u sifeysa shidaalka ee uu qaraxani ka dhacay.
Dalka Nigeria waxaa ku badan wershedaha sifaynta shidaalka ee sida sharci-darradaha ah u hawlgala, waxaana inta badan ku lug leh, ganacsato doonaya inay ka dhuuntaan sharciyada lagu maamulo sifaynta shidaalka iyo cashuuraha ay dawladdu ka qaaddo, waxaana wershedahan laga sameeyaa meelo aad u durugsan oo ay ganacsatadu kaga dhuuman karaan dawladda.
Dalka Nigeria ayaa ah dalka shidaalka ugu badan soo saara qaaradda Afrika, hase ahaatee dalkani wuxuu leeyahay wershedo aad u kooban oo si rasmi ah u qaabilsan sifaynta shidaalka, taasina waxay keentay in dalkani uu debedda ka soo dejisto shidaalka iyo saliidda qaybo badan oo ka mida shidaalka iyo saliidda uu isticmaalo, arrintan ayaa fursad u siisay in shirkado kala duwani ay si sharci-darro ah ugu lug yeeshaan ka ganacsiga sifaynta shidaalka.
Warbixintan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa innala socodsiinaya Ibraahin Xasan Daanduray
Tobanaan qof oo ku dhintay Nigeria